China SHEHWA-360-DTH seperated crawler n'ịnyịnya n'elu hydraulic ala-olulu mkpọpu ala rig Manufacturer and Supplier | Xuanhua
SHEHWA-360-DTH seperated crawler arịgoro n'elu hydraulic nke na-egwu ala
SHEHWA-360-DTH mkpọpu ala a na-ejikarị eme ihe na-emeghe oghere dị ka simenti, nkà mmụta banyere ígwè, ihe ndị na-egwupụta coal, ebe a na-egwu mmiri, na-egwu mmiri na-egwu n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ, nchekwa mmiri, ike mmiri na ọrụ nchekwa mba.
seperated crawler n'ịnyịnya n'elu haịdrọlik ala-na-oghere mkpọpu ala rig
SHEHWA-360-DTH mkpọpu ala a na-ejikarị eme ihe na-emeghe oghere dị ka simenti, nkà mmụta banyere ígwè, ihe ndị na-egwupụta coal, ebe a na-egwu mmiri, na-egwu mmiri na-egwu n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ, nchekwa mmiri, ike mmiri na nchekwa ihe owuwu mba. Oghere oghere ya dị 90-1152mm, nke nwere ike ịkwado ya na ụdị compressors dị iche iche iji ghọta nnukwu ihe DTH.
1. Off-ibu ikike
A na-eji ogwe osisi ike ndọda ejiri mepụta ahụ, nke na-ebelata esemokwu esemokwu mgbe ọ na-eje ije, na-eme ka nkwụsi ike nke njikọ dị n'etiti ahụ na egwu ahụ dịkwuo mma, ma na-eme ka chassis nke mkpọpu ala na-adịgide adịgide ma kwụsie ike. Mgbe ị na-agafe mkpọda, na ịrị elu ogologo nwere ike iru ogo 35.
2. Onye na-agagharị Rotary
Nnennen-ezé reducer nwere obere okpomọkụ ịrị elu, elu ibu-agba na ogologo ọrụ ndụ, nke nwere ike ịgbanwe rotary ọsọ dị ka nkume ekweghị ekwe. Ejiri igwe eletriki Eton nwere Rotary iji mezuo ọnọdụ ọrụ kwụsiri ike. Ejiri ya na nkwonkwo ume ike iji belata mmetụta mmeghachi omume nke ịkụpu olulu iji mebie ihe na-agbanwe.
3. Removaljá iwepụ ngwaọrụ
Onye na-anakọta uzuzu na-agbaso nkà na ụzụ nke na-agba mmiri na-ekpochapu ájá, nke nwere ike nhicha ájá, arụmọrụ dị elu nke ikuku, nkwụsị ọkụ na-ekpo ọkụ, obere ikuku ikuku, ike dị ala, ọrụ siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, ma na-echebe ahụike nke ndị ọrụ. Na elu àgwà nyo ihe, ájá mwepụ arụmọrụ na ọrụ ndụ na-ekwe nkwa.
IN Isi nkọwa
Drilling onu akara dayameta 90-152mm
Ọrụ Nrụgide Ikuku 1.38-2.46 Mpa
Na-atụgharị iyi 1970N.m
Na-agbanye ọsọ ọsọ 0-100Rpm
Na-eweli ike 20KN
Eji etiti siwing Aka ekpe 53 Celsius / Aka nri 35 Celsius
Eji etiti pitching 180 Celsius
Mgbapu ọganihu ọganihu Aka ekpe / Aka nri 45
Mgbapu ọganihu ọganihu kehoraizin 25 Celsius / 60 Celsius
Ikike ogo 35 Celsius
Onye na-emepụta igwe YUCHAI dizel wdg
Gosiri ike 56/70 Kw
Akụkụ 6900 * 2186 * 2300mm
Ibu ibu 6500kg
Nke gara aga: TY320-3 Bulldozer
Osote: SHEHWA-370-DTH seperated crawler arịgoro n'elu hydraulic nke na-egwu ala